Hot Air လေကြောင်းလိုင်းဂဟေဘူတာ
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. ၏ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါတယ် Hot Air လေကြောင်းလိုင်းဂဟေဘူတာ, စက်ရုံမှာတည်ရှိပါတယ် Taiwan။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းမှာတော့ကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဈေးနှုန်းများနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်နှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှ clients များထုတ်ကုန်ကျော်ထောက်ပံ့။ ထုံးစံအမိန့်နှင့်ပုံမှန်အမိန့်နှစ်မျိုးလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းမှကုန်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရှင်များ၏သက်သေပြနျူကလိယရှိသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်များမဆိုလိုအပ်ချက်များကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းကောင်းစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရှင်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ရှိသည်။ သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက? အခမဲ့ခံစားရ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
တပ်ဆင်ရန်နှင့်အစားထိုး 1. လွယ်ကူ, စိတ်ကြိုက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
2. ကအပူချိန် display ကိုတစ်ဦးကြည့်မှာ function ကိုညွှန်ကြားချက်များ, ကိုယ်ထည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, အိတ်ဆောင်, အစွမ်းထက်, လှပတဲ့ရှိပါတယ်။
3. ဂဟေသံကအလိုအလျှောက်ထောက်လှမ်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, နှိုးဆော်သံ function ကို, နှင့်ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည်ကပိုကျယ်ပြန့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရှိပါတယ်။
4. အမြင့်အပူချိန်အော်တိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်နှိုးဆော်သံ functions တွေ။
5 အသုံးပြုသူကိုအသုံးပြုခြင်းအလေ့အထသည်နှင့်အညီလုပ်နိုင်, သို့မဟုတ်တပ်ဆင်နှင့် disassembling ၏စက်ကိရိယာဝိသေသလက္ခဏာများ, သုံးခြားနားချက်သေနတ်နှင့်သံအပူချိန် / Airflow / Display ကို mode ကို / သံကအိပ်ပျော်ခြင်းအချိန် / သေနတ် AUTO နှင့်လက်စွဲထားသို့မဟုတ်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်။
6. Manufactory တိုက်ရိုက်ရောင်းချ, ကုန်ပစ္စည်းများများရောင်းလို, ပို့ဆောင်မှုနေ့စွဲအစာရှောင်, ကောင်းအရည်အချင်းစျေးနှုန်း၌ရှိကြ၏။
7. အမြင့်အာဏာ rework ။
8. သင် button ကိုထိန်းချုပ်သောဂဟေလုပ်ငန်းစဉ် -all သင်က၎င်း၏အမြင့်ဆုံးပေါင်းစည်းမှုဒီဇိုင်းအားဖြင့်လိုအပ်၎င်း၏ယ့်စက်က, သေးငယ် workbench, Non-ရောထွေးကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့်အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
9. ဒီဆန်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံလေထုစီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မတရားစွာအပူ ir အပူ ​​rework ဘူတာရုံ၏ပြဿနာကိုကျော်သွားတယ်။ ဒါဟာဂဟေဆက်အခမဲ့ဂဟေနှင့်အတူလွယ်ကူသောသဘောတူညီချက်နိုင်ပါတယ်။
10. ထို max ကိုအပူချိန်480ºCအထိဖြစ်ပါတယ်
ဂဟေဘူတာ, လျင်မြန်စွာလျှောက်လွှာနိမ့်-အပူချိန်ဂဟေဆော် High-အာဏာအခမဲ့-ခဲဂဟေဘူတာရုံ, ပြန်လာအပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
1. Compound ဂဟေပျဉ်းဒီဇိုင်း, အတူတကွ Exothermic ပစ္စည်း & ဂဟေပျဉ်းစားသုံးမှုအာဏာ 80W ။ ထိုသို့လျင်မြန်စွာလျှောက်လွှာနိမ့်အပူချိန် & အခမဲ့-ခဲဂဟေအပူပြန်လာ။
2. အမည်ညွှန်ပြ, အမှားသတိပေးပစ္စည်းကိရိယာများ, Exothermic ပစ္စည်းအမာခံ, Circuit-ဘုတ်အဖွဲ့အမှား။ အလုပ်သမားပြုပြင်ကြောင့်နိုးလျင်, အမှား signal ကိုထိခိုက်စေ။
4. ပေါ့ပါးခရီးဆောင်လက်ကိုင်ကြောင့် အသုံးပြု. အချိန်အကြာကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ခုခံအပူပစ္စည်းကိုသုံးခြင်းဖြင့်အစားထိုး 5. ပြောင်းရန်ဂဟေပျဉ်းစက်ရုံ။
6. LF-1700 အပူချိန်-ထိန်းချုပ်မှုဂဟေဘူတာရုံ၏ panel ကိုအပေါ်အပူချိန် 1150 ° C မှ 480 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေးနှင့်အတူဒစ်ဂျယ်တယ်ဖော်ပြပါတယ်။ အဆိုပါ panel ကိုအပေါ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပြသအပူချိန်စစ်ဆင်ရေးအပေါင်းသည်လိုအပ်သောအပူချိန် setting ထို့ကြောင့်တင်ထားရန်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော setting ကိုအလွန်တိကျမှန်ကန်သည်။
1. ယုံကြည်စိတ်ချ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တည်ရှိသည်။
2. ကျေးဇူးတင်ကြောင်း: ကျနော်တို့မြတ်နိုးနှင့်သင်ငါတို့အားပေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဖောက်သည်မှကျေးဇူးတင်စရာပါခံစားကြရသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်နှင့်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များနှင့်အကောင်းထောက်ခံမှုနှင့်တကွသင်တို့ဆီသို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်။
3. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်: ကျနော်တို့ထက် ပို. အနှစ် 30 အဘို့ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘူးပြီ။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူခိုင်မာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းရှိသည်။
4. ကျွန်တော်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်နေတယ်စောင့်ရှောက်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
5. စျေးနှုန်း: ကျွန်တော်အမြဲယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းတွေကိုပူဇော်ချကုန်ကျဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကူညီသည်။
6. အရည်အသွေး: ကျနော်တို့တင်ပို့မီ 100% စစ်ဆေးရေးလုပ်ပါ။
အသုံးပြုသူ-friendly ဖြစ်ဒီဇိုင်း 1.
စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသည်။ သင်စက်တွေ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်မနေရင်တောင်သင်အခက်အခဲမရှိဘဲက operate နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးဂဟေဘူတာရုံ၏အရောင်တူတစ်ဦးကိုသံပိုင်ရှင်တစ်ဦးထားအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအလွန်အမင်း functional ကိုသံပိုင်ရှင်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်းအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြင်အာရုံတသမတ်တည်းတစ်သဘောဆောင်တတ်၏မသာ။
ဒစ်ဂျစ်တယ် display ကို
အဆိုပါ LF-3500 ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် display ကိုတစ်ဦးကြည့်မှာထားအပူချိန်စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူစေသည်။
Password ကို function ကို:
Settings ကိုမမျှော်လင့်ပဲပြောင်းလဲနေသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ password တစ်ခုသုံးပြီးသော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၏သင်တန်းကအားလုံး setting ပြောင်းအလဲများကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့် modes မှ switching ကနေအသုံးပြုသူများကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ worksite သည်အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်အသုံးပြုမှုတစ်ဦးစတိုင်ကိုရွေးဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။
လျပ်တပြက် mode ကို:
သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့် workpiece, အစိတ်အပိုင်း, သို့မဟုတ်ပျဉ်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုက်ညီဖို့ခြိနျးအပူချိန်ပြောင်းလဲချင်တဲ့အခါဒီ feature ကိုအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားလျပ်တပြက်အပူချိန်တစ်ဦးရွေးချယ်မှုကနေတပ်မက်လိုချင်သောအအပူချိန်ကိုရွေးပါ။ လျပ်တပြက် mode ကိုသင့်ရဲ့ဒုက္ခကိုကယ်တင်နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သောတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။
adjustment mode ကို:
အပူချိန်ညှိ * မည်သည့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းမှု mode ကိုအတူဘယ်တစ်ဦးဒုက္ခလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ဖို့အသုံးပြုယခု LF-3500 မှတိုင်းတာပျဉ်းအပူချိန်ဝင်ရောက်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
* ပျဉ်းပုံသဏ္ဍာန်, အပူပေးစက်ကိုအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအချက်တွေကြောင့်အဲဒီအပူချိန်ခြားနားရှိကွောငျးကိုအမှုအတွက် set ကိုအပူချိန်ကိုက်ညီမှပျဉ်းအပူချိန် Adjust ။
အဆိုပါ Xytronic LF-1700, 100W ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂဟေဘူတာရုံဒစ်ဂျစ်တယ်အပူချိန် readout နှင့် 480 မှ 150 ၏ဂဟေအပူချိန်အကွာအဝေးဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတယ်။
၎င်း၏အီလက်ထရောနစ် circuitry ဂဟေသံ mount လုပ်မယ့်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာအားဖွငျ့, ဂဟေအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အဆိုပါအီလက်ထရောနစ် circuitry သုည Voltage အထိခိုက်မခံအစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်းဗို့နှင့်လက်ရှိချပြီးကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်၏မျိုးဆက်ကာကွယ်နိုင်သည့်နည်းစနစ် switching အလုပ်ခန့်။ အပိုပစ္စည်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာကြာရှည်, သံကာဝတျဆငျတစ်အကွာအဝေး, နီကယ်သတ္တု / chrome ဂဟေအကြံပေးချက်များသေချာစွာ functioning ကို LF-1700 စောင့်ရှောက်စေခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ဂဟေဆက်နှင့် Desolder ဘူတာ
အထူး RoHS လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ခဲ-အခမဲ့ဂဟေ / desoldering သည်ဒီဇိုင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်ဂဟေနှင့် desoldering ဘူတာရုံ။ အဆိုပါဘူတာရုံတစ်လေဟာနယ် pump built-in များနှင့် 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (3​​02 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) နှင့် 480 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (896 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) နှင့် 300 ° C အကြား desoldering ပျဉ်းအပူချိန် (အကြား, ဂဟေပျဉ်းအပူချိန်တင်ထားရန်အသုံးပြုသူနိုင်ပါတယ်ရာအီလက်ထရောနစ် circuitry ထည့်သွင်းခဲ့သည် 572 ° F) နှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့အကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်အပူ element တွေမပါဘဲ 450 ° C (842 ° F) ။ အပူချိန်သံတစ်ဒါး Sensor ကိုအသုံးပြုသည်၎င်း၏တဲ့ operating အပူချိန်၏±3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (±6° F) အတွင်းထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ optional ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခု 80W ပူလေကြောင်းခဲတံနှင့်မျက်နှာပြင် mounting ထုတ်ကုန်များအတွက်တစ်ဦး SMD rework မှေးညှပျအပါအဝင်သီးခြားစီရရှိနိုင်ပါသည်။
●အပူပေးစက်နှင့်အာရုံခံကိရိယာ detection နဲ့အော်တိုပါဝါပယ်ပျက်ကွက်။
စကားဝှက်ကိုအတူ●အပူချိန် '' သော့ခတ်-ထွက် '' အင်္ဂါရပ်။
● ESD လုံခြုံနှုန်းကိုမြင့်တက်စေပါတယ်-အခမဲ့ circuitry ။
● '' သုညဗို့ '' အီလက်ထရောနစ် switching ဒီဇိုင်းကိုအထိခိုက်မခံအစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
●နောက်ကျခဲ့စုတ်ယူခြင်းပျဉ်းတက်နှင့်သဟဇာတမဂဟေဆက်၏ပြဿနာပပျောက်ကူညီရင်း - pump ကို actuators switch ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး 1.5 စက္ကန့်နို့စို့နေဆဲဖြစ်သည်။
●စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနချွေတာ mode ကို: မဝင်မိနစ် 20 အပြီးတွင်အပူချိန် 40 မိနစ်ပါဝါစားသုံးမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပျဉ်းဘဝကိုတိုးချဲ့ရာ '' အိပ်စက်ခြင်း mode ကို '' မှအာဏာကို switches များပြီးနောက် 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
●သံအလုပ်လုပ် option ကို: ဂဟေနှင့် desoldering နှစ်မျိုးစလုံး၎င်းတစ်ချိန်တည်းမှာသုံးနိုင်သည်။
SMD ချစ်ပ်, မဲဆောက်, ပြား pack ကို ICS စသည်တို့သည်●မလုပ်မဖြစ် SMD မှေးညှပျ
●ဂဟေအကြံပေးချက်များတစ်အကွာအဝေးသီးခြားစီရရှိနိုင်ပါသည်, 85-5196 နိုင်ရန် codes တွေကို 85-5180 ကြည့်ပါ
●ဂဟေနှင့် desoldering သံနှင့်ရပ်တည်မှုနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံထောက်ပံ့။
1. အငယ်စားကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာတွင်ဒီဇိုင်းကိုပေးရန်ကနည်းနည်းနေရာသိမ်းပိုက်, ကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်ချောမောပါပဲ။
ရှည်လျားအလုပ်လုပ်ဘဝအနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အတူ 2. Brushless မှုတ်တံ။
အပူချိန်ချ200ºမှ C သောအခါ 3. ကအပူဒြပ်စင်၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်နှင့်ပူပြင်းလေကောင်းလေသေနတ်ကာကွယ်နိုင်သည့်ပြည်နယ်ချွေတာစွမ်းအင်သို့လှည့်။
5. လျင်မြန်စွာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် offset function ကိုအသုံးပြုပျဉ်းအပူချိန်၏ offsetting လွယ်ကူ။
ထိထိရောက်ရောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအစိတ်အပိုင်းများမှပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည့် 7. Anti-static နဲ့ဒီဇိုင်း, ။
8. ဒါဟာအလိုအလျောက်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်နှိုးဆော်သံ function ကိုကို detect သိရသည်။
9. အသုံးပြုခြင်းဖွဲနု-အသစ်ခိုင်ခံ့မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဖိအားယဉ်ဆန့်ကျင်ကျဆုံးခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ။
10. ကို Safe ဂဟေဆက် QFP, PLCC, BGA နှင့်အခြားအပူချိန်-ထိခိုက်မခံတဲ့အစိတ်အပိုင်းများကို။
အရည်အသွေးမြင့်မားပစ္စည်း, လှပအဆင်းကို အသုံးပြု. 11. Shell ။
1. Micro-processor ​​ကိုထိန်းချုပ်ထားသော electro-static ရိနာစွဲ (ESD) ဘေးကင်းလုံခြုံယူနစ်။
2. Easy-To-အသုံး touch နဲ့ type ကို panel ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် display ကိုအတူထိန်းချုပ်ပေးတယ်။
တယောက်အထုပ်ထဲမှာ 3. ပူလေကြောင်းသေနတ်ပေါင်းစည်းကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး-friendly ပြုပြင်ခြင်း, စနစ်, ဂဟေသံ, သံနှင့်မီးခိုးစုပ်ယူထားပါသည်။
အဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်ကမှာနေသူများကဖန်တီးအငွေ့စုပ်ယူကြောင်း4built-in မီးခိုး extractor ။
ရိုးရှင်းသေးထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်အပူချိန်ရွေးချယ်ခြင်းသည် 5. ဘူးသီးအမျိုးအစားဂဟေသံကအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်။
ဂဟေသံကအပူချိန်၏ 6. ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် display ကို။
ဂဟေကိုသံသည် 7. အိပ်စက်ခြင်း mode ကို။ အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ပါတယ်ကြာချိန်ပေါ်အခြေခံပြီးအိပ်စက်ခြင်း Mode သို့သွားဂဟေကိုသံ။
8. ဂဟေသံကဒစ်ဂျစ်တယ် calibration ။ အလွယ်တကူအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့ချိန်ညှိမှုနှင့်အတူ offset အပူချိန်ညှိလိုက်ပါ။
9. Intelligent အမှား-အစီရင်ခံယန္တရား။ ကို detect နှင့် sensor နဲ့အပူပေးဒြပ်စင်နှင့်အတူပြဿနာများများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကြား။
10. Auto-အအေး functionality ။ OFF လှည့်ရှေ့တော်၌ဘေးကင်းလုံခြုံအပူချိန်မှ system ကိုချအအေးမှလေကြောင်းရန်မှုတ်။
လေကြောင်းရန် nozzle အမျိုးမျိုးနှင့်အတူ 11 Compatibility ။
ဂဟေအကြံပြုချက်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူ 12 Compatibility ။
ကြီးမားတဲ့ de-ဂဟေသည်ကိုလည်းအထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောအထွေထွေသေးငယ်တဲ့ဂဟေဆက်အဆစ်, ဂဟေဆက်အဆစ်, ဟိုက်ဘရစ်ခဲယဉ်းဂဟေဆက် de-ဂဟေများအတွက်သင့်လျော်သောအပြင်။
1. အဆိုပါအငွေ့ extractor အရည်အသွေးမြင့်မား၏ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အနည်းငယ်သာလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုစားသုံး။
2. အဆိုပါအငွေ့ extractor ပျမ်းမျှတန်းတူ width ကို၏ partitions ကိုထဲသို့ဖြတ်တောက်ခြင်းပလက်ဖောင်းနေသောအပိုင်းသုံးပိုင်း, အငွေ့စုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့်ဖုန်မှုန့်ကျင်းပနိုင်ရန်နှစ်ဦးစလုံးသည်တစ်မြေမှုန့်စုဆောင်းသူတစ်ဦးချင်းစီက partition အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအဆို့ရှင်အသီးအသီးက partition ၏အဆုံးမှာထားသဖြင့်, pneumatic tappet နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားမှာပါ။ ဂဟေသေနတ်မဆိုအနေအထားသို့ရောက်ရှိသောအခါ, သက်ဆိုင်တဲ့အဆို့ရှင်ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, အမြဲလေဝင်လေထွက်ပဲအငွေ့ generate သောဂဟေဒေသများတွင်သာအကောင်အထည်ဖော်သည်ကိုထောက်ပြကြပါတယ်။ ဤစနစ်ကိုအလွန်လိုအပ်သောလေကိုပမာဏကိုလျော့နည်းစေမှာထို့ကြောင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကယ်တင်တော်မူ၏။
ဒါဟာအလွန်ပေါ့ပါးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်စသည်တို့ကို,3ဒါဟာအထူးစက်မှုဂဟေဆော်အငွေ့နှင့်အလင်းအလေးချိန်အမှုန်အဘို့အဒီဇိုင်းပြုလုပ်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အီလက်ထရောနစ်လှိုင်းဂဟေအဖြစ်အများအပြားဖုန်မှုန့်နှင့်ရေနံအငွေ့ထုတ်လုပ်ကြောင်းသောအရပ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်, သတ္တု processing, လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း ။ တစ် 2x 2.5m ရှည်ရွှေ့ပြောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုက်တွေနဲ့အတူကကွဲပြားခြားနားတဲ့နေရာဒေသသို့ပြောင်းရွေ့နိုင်ပါတယ်။
4. ဂဟေဆက်အငွေ့ extractor ဒီမျိုး incomparable စွန့်ပစ်ခြင်းထိရောက်မှုရှိပါတယ်: rated လေကြောင်းရန် volume အမှာ, အဂဟေဆော်အငွေ့ဖျက်သိမ်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားသည်, အရှင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်တိုက်ရိုက်ဘယ်တုန်းကမှစွနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ IR860 solderlight အထူး SMD / BGA rework သည်ဒီဇိုင်းနှင့်လည်းပြန်လည် balling သေးငယ် BGA အစိတ်အပိုင်းများသည်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Infra-အနီရောင်ကို pre-အပူပေးစက်နှင့် တွဲဖက်. သုံးတဲ့အခါ system ကို SMD / BGA rework စစ်ဆင်ရေး၏အရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်ထူးခြားပြောင်မြောက်တိုးတက်မှုရရှိရန်လိမ့်မည်။
မှာ IR-860-II ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
1. Quartz အပူပေးစက်ပိုမြန်အပူ-up time ကိုသွားတယ်။
2. အဆိုပါထိရောက်သောကြိုတင်အပူအမြင့်လင်းမျက်နှာပြင်ကနေ PCB ပရိသတ်အောက်ခြေ 45mm ဖြစ်ပါတယ်။
3. 220C °မှာ setting ပြန်အပူပေးစက်၏အပူချိန်ကိုရ (75% စွမ်းအင်ကျောအပူပေးစက်ကထောက်ပံ့ပေးထိပ်အပူပေးစက်များကထောက်ပံ့ပေးစွမ်းအင်၏ 25% သည်) ထိရောက်သော preheating စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပိုကြီး PCBs ၏ကွေးနှင့်အပူစိတ်ဖိစီးမှုတားဆီးနှင့် / နိုင် သို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ပျက်စီးမှုပဲထိပ်အပူပေးစက်ထဲကနေအပူ။
။ မှ hesitance မ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု။